Dad ayaa aaminsan inay weli yihiin Koofiya castii, kuwa kale ayaa aaminsan in koofiya castii ay weli joogaan= Nasashada Jimcaha.Q-143aad= - Latest News Updates
1-Nin Reer Booraame ahaa oo la hadlayay barnaamijka “Cafi Walaal”. Ayaa yiri: Sannadkii 1989kii ayaa Ciidamadii Koofiya castii Siyaad Barre oo Dad ku xasuuqayay magaalada Hargesa, ayaa gabar yar oo aad u Qurxaneyd oo 16 jir aheyd oo ey kufsan rabeen, ayaan gurigeeyga ku qariyay. Waana ka badbaadiyay.
Shiikhii ayaa ku yiri: Wanaag ayaad sameysay, ajir Alla ha kaa siiyo. Ninkii ayaa yiri: Shiikhoow, Quruxleeydii weli banaanka uma bixin, Gurigeeyga ayeey Joogta, hadda ( 2019) ma u sheegi karaa in koofiya castii Maxamed Siyaad eynan wadanka joogin, Siyaad Bare-na uu Geeriyooday.( F.S: 1aad)
(Dad ayaa aaminsan inay weli yihiin Koofiya castii, kuwa kale ayaa aaminsan in koofiya castii ay weli joogaan, Somaliyey ,Runta ha la isku sheego hana leys Cafiyo)
3- Arday dhigta Dugsiga dhexe ayaa Macallinkii Maaddada English-ku ugu Qoray Sabuuradda erayo ku cusub oo ah “Hour”= “Saacad” iyo “Honour”= “Sharaf ”. Marki u sharxayay waxa u macallinku u sheegay in Xarafka “H” aan lagu dhawaaqin. Fasaxii xisadaha dhaxdooda ayaa Macalinkii Ardaydii mid ka mid ah ku yiri: Raashinkaan ii soo kuleeyli “Heat it” iina soo celi.
Ardaygii Raashinkii ayuu cunay, kadibna weelkii oo faaruq ah ayuu Macalinkii u soo celiyay. Macallinkii oo careysan ayaa ku yiri: Maxaad sameysay?. Ardaygii ayaa yiri: Macallin markii aad ii dhiibeysay waxaad igu tiri: “ Heat it” soo kuleyli anna waxaan ka tagay “H-tii” waxaana ii soo baxday “Eat it” anna waa cunay. (F.S: 3aad)
( English-ka Reer Diaspora ee Dalqada laga hadlayo siddii sanqoolna loogu dhawaaqayo iyo Kan lagu barto Dugsiga “ High Linguistic school” ee xaafadda Labadhagax ee Deg.wardhiigley ha leeys waafajiyo, iyaguna Somali fiican ma yaqaaniin, annaguna English fiican ma naqaan, see leeysku fahmaa?)
Muddo kadib ayey Barkinta hoosteeda u galisay “Xaar” yar, markii uu sariirta jiiftay ayuu yiri: waa maxaay waxa soo urayo?. qolkii ayuuna baartitaan ku bilaabay. Waxa ey ku tiri: waa Xaar yar oo Barkinta hoosteeda ku jiro. Ninkii ayaa ku yiri: See wax kaa noqdeen, ma Xaaraa yaraan leh. Waxa ey ku tiri: Waa Runtaa, waxaan maqli jiray, Xaar iyo Naaguba yaraan male. Haaheey, Jimco wanaagsan.( F.S: 4aad)
Markii uu soo wacay ayuu ka maqlay Telephonkii, “Please call back” iyo “Not available”. Markaa ayuu ku yiri: Awoowgeed Alla Gub, soo taan ku balanay Af Barawaanka ha igula hadlin. ( F.S: 6aad)